Nahafaty olona ny COVID-19 tany Afghanistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Avrily 2020 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Español, русский, Français, Esperanto , English
“SEHAT (Fanatsarana Rafitra ho an'ny Fivoaran'ny Hetsika Ara-pahasalamana). Misy dokotera vehivavy ihany koa ao amin'ny Hopitaly Hootkhail mba ahafahan'ny toerana mandray ireo izay tsy afaka mandeha any ankafa. ” Sary: Rumi Consultancy / Banky Iraisam-pirenena. Avy amin'ny kaonty Flickr an'ny Banky Iraisam-pirenena. Fahazoan-dàlana: CC BY-NC-ND 2.0.
Tena marefo manoloana ny areti-mandringana COVID-19 i Afghanistan: maro amin'ireo mponina miisa 32 tapitrisa ao aminy no niharan'ny ady an-trano am-polo taonany maro izay mampalemy, raha tsy potika tanteraka mihitsy aza, ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny firenena. Mizara sisintany amin'i Iran ihany koa i Afghanistan, iray amin'ireo firenena tena voakasiky ny COVID-19. Tsy mahagaga noho izany raha nahitana ireo tranga sy maty voalohany tao Afganistana ankehitriny.
Hita tany amin'ny faritany avaratr'i Balkh tamin'ny 22 Martsa ny fahafatesana voalohany, araka ny fanamafisana avy amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka. Vehivavy iray 45 taona ny tranga faharoa tany amin'ny faritany Herat andrefana. Tamin'ny 28 Martsa, tranga miisa 174 no voamarina fa mitondra ny otrikaretina coronavirus, ilay viriosy izay nahatonga ny aretina, ary olona telo no maty.
Olana fanampiny ny fiverenan'ireo mpitsoa-ponenana
Iray amin'ireo antony maro nahatonga ny ady amin'ny valanaretina ho sarotra kokoa ho an'i Afghanistan ny hamaroan'ireo mpitsoa-ponenana Afghana mipetraka any amin'ireo firenena manodidina toa an'i Iran sy Pakistan. Raha noterena hiverina any amin'ny fireneny ny sasany amin'izy ireo, ny hafa kosa nisafidy ny hiverina mihitsy.
Nanomboka nametraka fepetra manokana mba hiadiana amin'ny valanaretina ny governemanta Afghana tamin'ny faran'ny volana Martsa. Taorian'ny nahitana ireo tranga miisa 32 tany amin'ny faritany Herat tamin'ny 25 Martsa dia nanome baiko ny famerana ny fifamezivezena ny governemanta tany amin'ireo faritany miisa telo ireo. Koa satria ny faritany Herat no vavahady ho an'ireo mpitsoa-ponenana Afghan maro izay miverina avy any Iran dia hoy i Wahidullah Mayar, ny mpitondra tenin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka tamin'ny 25 martsa hoe:
“Avy any Iran ny sasany tamin'ireo tranga miisa 30 tao Herat. Mampiseho izany fa miparitaka any amin'ny fiarahamonina ilay viriosy.”
Nohamafisin'ny tompon'andraikitra iray hafa, Ahmad Jawed Nadem, filohan'ny Sampan-draharahan'ny Mpitsoa-ponenana sy ny Mpila Ravinahitra ao amin'ny faritany Herat ny fahatongavan'ireo mpitsoa-ponenana avy any Iran ary nilaza izy fa 30.000 teo ho eo ny Afghana nisafidy ny hiverina tany Afghanistan nanomboka ny 20 Febroary ka hatramin'ny faran'ny volana Martsa.
Manahy momba ny fomba hivoahana amin'ny valanaretina ny Minisitry ny Fahasalamana any Afghanistan, Ferozuddin Feroz, araka ny nambarany tamin'ny 24 Martsa:
Mety hisy olona 16 tapitrisa [antsasaky ny mponina ao amin'ny firenena] no tratran'ity viriosy ity araka ny vinavinan'ny OMS [Fikambanana Erantanin'ny Fahasalamana].
Araka ny tarehimarika navoakan'ny Minisiteran'ny Fahasalamana any Afghanistan, olona miisa 174 no voamarina fa mitondra ny valan'aretina amin'ny tranga ahiahiana miisa 800 hatreto.
Ny olan'ny fanajana elanelana ao anaty fiarahamonina izay mahery ao amin'ny fitangoronan'ny olona
Mifantoka manodidina ny vondrom-piarahamonina ny kolontsaina Afghana, ary misokatra araka fomban-drazana amin'ny hetsika ara-tsosialy toy ny mariazy, ny fifaninanana ara-panatanjahantena, ny hetsika ara-pivavahana ho an'ny fahavorian'olona toy ny fianakaviana, mpifanolo-bodirindrina avy any amin'ny distrika sy ny tananakely manodidina. Araka ny nambaran'ny mpitondratenin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana Mayar hoe: “Ireo olona mivory ao amin'ny toerana iray no olanay.”
Manambara izany ity sary navoaka tamin'ny 22 Martsa ity:
Indro ny lalao ady totohondry omaly tao Mazar-e-Sharif (faritany Balkh). Sary tao amin'ny tambajotra sosialy.
Nandray fepetra manokana ny governemanta hanombohana ny fihibohana: noferany mandritra ny telo herinandro ny fivezivezena ao Kabul renivohitr'i Afghanistan. Nahenany ho telo ora ihany koa ny ora fiasana any amin'ny biraom-panjakana ary nomena fotoana fialan-tsasatra handraisan-karama ireo vehivavy bevohoka sy ireo reny manan-janaka mianatra any amin'ny akaninjaza.
Anisan'ny toerana hiparitahan'ny valanaretina ny tsena eny ankalamanjana izay toerana nentin-drazana ho fiantsenana sakafo sy hifandraisan'ny fiarahamonina sy fifanakalozam-baovao any Afghanistan ihany koa. Araka ny filazan'i Abdul Qayum Rahimi, governoran'ny faritany Herat:
Efa nodinihina ny momba ny tsena ary hisy ny fanovana amin'ity zoma ho avy ity
Mety ho lasa loharano hipoiran'ny areti-mandringana ihany koa ny Parlemanta Afghan. Nanambara ny Minisitry ny Fahasalamana Feroz fa misy tranga roa mampiahiahy amin'ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta, izay nahatonga ny andrim-panjakana nihidy nandritra ny roa herinandro.
Na dia eo aza anefa ny maha-ratsy ny toe-draharaha sy ny fanapahan-kevitry ny governemanta farany dia toa hita fa tsy manaraka ny fepetra ny ankamaroan'ny olona ary tsy miraharaha firy ny loza ateraky ny coronavirus.
Naminavina ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka fa mety hamindra amin'olona miisa 25 tapitrisa amin'ireo vahoaka miisa 32 tapitrisa ao amin'ny firenena ny valan'aretina. Naminavina ihany koa ny Minisitra fa mety ho olona miisa 11.000 no ho faty raha tsy misy ny fitandremana matotra amin'ny covid19.
Hita amin'ity tranga tao Kabul tamin'ny 28 Martsa ity fa tsy niova firy ny fiainana andavanandron'ny mponina tao an-drenivohitra:
Kianja Pashtun-wat, Kabul, andro voalohany tamin'ny fihibohana, toa tsy niova amin'ny mahazatra. Nametra ny fivezivezena rehetra tao Kabul ankoatra ireo vitsivitsy ihany ny governemanta saingy toa hita fa tsy misy miraharaha ny olona.